Verenga makomborero ako, kwete matambudziko. - Anotungamira - Quotes Pedia
Muhupenyu, mafungiro anokoshesa. Maonero uye zviitiko zvedu zvinotsanangura kuti isu tiri ani. Mafungiro edu anofanirwa kunge akadaro zvekuti anotibatsira isu nevamwe vakatipota kufambira mberi uye kubudirira. Tinofanira kutarisa mberi muhupenyu netariro uye nekurarama.
Tinofanira kushandisa kugona kwedu kusvika kwakanyanya kunaka mukana kuti tikwanise kukura nekukoshesa hupenyu hwakakosha hwatakapiwa. Tese zvedu tine chikamu chedu chezvekutambudzika, asi kiyi ndeyekuti usamborega izvozvo zvichitinetsa. Asi munguva dzakadai, zvinobatsira zvikuru kana tichiverenga makomborero edu.
Kana kutadza kana matambudziko akatiwira, hatigone kuona chero chinhu kunze kwematambudziko. Panzvimbo pezvo zvakakosha Izvi zvinotipa mufaro uye simba rekutarisana nematambudziko edu.
Izvo zvinotipa simba kuti tikurire matambudziko edu nekuti tinoona kuti pane zvakawanda zvinhu zvakakodzera kurwira. Kune makomborero muhupenyu hwedu kuti ave akatenda. Izvi zvinotipa tariro, kurwisa matambudziko edu, uye kupfuurira mberi.
Tinofanira kudzidza zvidzidzo zvedu kubva kumatambudziko edu asi hatifanirwe kubatirira pane kusuruvara uye kutya kwakauya nazvo kwenguva yakareba. Chokwadi, zviri nyore kutaura pane kuzviita. Asi iwe unogona kuenderera mberi kana iwe uchizvitenderedza ne positivity. Unogona kufambira mberi kana ukazvishingisa mukuita izvo zvaunoda. Mune izvi zvese, rangarira kuti kuzvininipisa uye nekutenda kune zvese zvaunazvo.
Makomborero Quotes Uye Kutaura
Matambudziko Quotes And Sayings
Matambudziko Quotes Mifananidzo
Quotes On Mwari Makomborero
Mashoko Akangwara UyeZvirevo
Hupenyu hwangu rwendo rwangu naMwari. Zvingave zvakaoma dzimwe nguva, asi ini ndinovimbiswa kuti zvingave zvese zviripo. - Asingazivikanwe
Hupenyu hwangu rwendo rwangu naMwari. Zvinogona kuoma dzimwe nguva, asi ndinovimbiswa kuti zvaizo…
Pemberera zvinhu zvidiki uye hupenyu hwedu huve hukuru kupfuura nakare kose. - Asingazivikanwe
Hupenyu huzere nemafaro madiki atinowanzo tarisa. Tikatarisa tarisa, ruva diki mu…
Hupenyu hupfupi kuti uvanze manzwiro ako. Usatya kutaura zvaunonzwa. - Asingazivikanwe
Hupenyu hupfupi kwazvo kuti uvanze manzwiro ako, uye ichokwadi! Hatizvizive kusvikira uye…
Fara. Kwete nekuti zvese zvakakwana. Asi, nekuti iwe unosarudza kutarisa pane akakwana nguva. - Asingazivikanwe
Chaizvoizvo, mufaro isarudzo, uye mumwe anofara kana kusuwa nekuda kwezviito zvake. Kugona…
Mwari vachakuzarurira misuwo isingagone kuvharwa nemunhu. - Asingazivikanwe
Mwari vachakuzarurira misuwo isingagone kuvharwa nemunhu. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana: